Maxaad ka ogtahay dadka ka jawaaba wicitaanada gargaarka degdega ah ee nambarka 999? - BBC News Somali
Lahaanshaha sawirka BBC Three
Image caption Jamie
Marka ay dhacaan xaaladaha adag ee u baahan gargaarka degdega ah, waxaa inta badan la wacaa nambarka 999, halkaas oo lala xiriiriyo gaadiidka gurmadka caafimaadka ee ambalaasta loo yaqaano.
Haseyeeshee maxaad kala socotaa sida ay u shaqeeyaan dadka 24-ka saac maalin kasta ka jawaaba wicitaanada dadka?.
Barnaamij gaar ah oo ay BBC-da ka diyaarisay arrimaha ayaa waxaa lagu magacaabaa Ambulance, wuxuuna ka baxayaa taleefishinka isaga oo taxane ah.
Dadka ka shaqeeya waxaa ka mid ah nin lagu magacaabo Jamie, waxa uu si aad u degen uga jawaabayaa wicitaanada dadka, waxaan kusoo hagaagnay isaga oo ka jawaabaya taleefoon uu xaruynta usoo diray ku dhaawacmay ciyaar kubbad ah, waa uu miyir beelay markii hore, balse hadda waa uu soo baraarugay.
Jillibka ayaa kala baxay, waxaana markiiba loo diray gaadiidka gurmadka degdegta ah oo ay saaranyihiin shaqaale caafimaad oo xakamayn kara xaalada inta isbitaalka laga gaarsiinayo.
Jamie marka uu wicitaankaas oo kale helo waxa uu xogta galiyaa qaanad kumbuyuutarka ah oo loogu talogalay, taas oo kala heer ah , tusaale ah qofkan kubbada ku jabay waxa uu galiyay heerka seddexaad oo ka dhigay in qofkaas u baahanyahay gurmad degdeg ah.
Dadka xaruntan ka shaqeeya waxa ay isugu jiraan dad 20 sano jir ah illaa kuwa 60 jir ah.
Darbiga waxaa ku rakiban shaashad weyn oo muujinaysa inta qof ee soo wactantay, markii la gaaray 1pm, wicitaanada soo galay waxa ay gaarayeen 1,501, dhammaantoodna waa laga wada jawaabay muddo dhan 0.2 ilmiriqsi gudahood.
Haddii dadka diyaarka u ah in ay jawaabaan wicitaanada ay eber noqoto, habka kumbuyuutarka ayaa fariin cod ah siinaya qofka soo wactamaya, wuxuuna u sheegayaa in haddii aysan xaalada degdeg ahayn uu markale kusoo celiyo ama uu cod duubo.
Dadkan kaliya wicitaanada kama jawaabaan, ee sidoo kale dadka ayay taleefoonka ka caawiyaan iyaga oo aanan gaadiidka ugu yeerin, tusaale waalid hanfariirsan oo uu wiilkooda margaday ayaa mar la caawiyay, loona sheegay wixii ay samayn lahaayeen.
"Gabadh 22 jir ah ayaa isoo wacday, waxayna igu tiri ciddi ayaa iga jabtay, waxyaabaha noocaas ayaad la kulmaysaa, waana waqti lumis" ayuu yiri Jamie.
Image caption Hollie
Meel aan Jamie ka fogeyn waxaa fadhida Hollie oo shan dhalo oo hortaala ay leerarkooda bikaacinayaan, iyaga oo muujinaya gaadiidka gurmadka ah ee kusii jeeda meelihii loo diray ama kuwa kusoo laabanaya isbitaalada inta ay bukaankii soo qaadeen.
Waxa aan la kulanay iyada oo ku jirta hawl ah in nin uu wadne xanuun awgiis ugu dhintay meel maqaayad ah, taas oo ka dhigan in markan ay wargaliso booliiska.
Islamarkii ay kasoo baxday wicitaankaas, qof kale ayaa markiiba soo wacay, waa qof ka cabanaya gabadh yar oo dawo qaadatay ka badan intii loogu talogalay, islamarkaasna mindi ku waabinaysa qofka soo wactamaya.
"Waxaan oo kale si joogto ah ayay u dhacaan" ayay tiri Hollie oo intaas ku dartay in aysan indhaha ka qaadin shaashada, shaqaduna tahay mid isdabo joog ah.
Barnaamijka Ambulance waxa uu ka bixi doonaa BBC One taariikhda marka ay tahay 26 April , saacaduna 9pm.